Ciidamada Ciraaq oo si buuxda magaalada Mowsil uga xoreeyay maleeshiyada Daacish - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada Ciraaq oo si buuxda magaalada Mowsil uga xoreeyay maleeshiyada Daacish
July 9, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada Ciraaq oo si buuxda magaalada Mowsil uga xoreeyay maleeshiyada Daacish. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
Mowsil-(Puntland Mirror) Ciidamada Ciraaq ayaa dib u la wareegay magaalada Mowsil, sida ay sheegayaan wararku.
Raysulawaaraha Ciraaq Haidar al-Abad ayaa maanta oo Axad ah tagay gudaha magaalada Mowsil si uu uga qeybgalo dabaaldega guusha laga gaaray maleeshiyada Daacish.
Ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa u dagaalamayay dib u qabsashada Mowsil tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
Ciidamada Kurdiyiinta ee Peshmerga, maleeshiyo beeleed Suniyiin iyo Shiico ah ayaa sidoo kale ku lug lahaa dagaalka dib loogu xoreynayay magaalada.
Maleeshiyada Dowladda Islaamiga (Daacish) ayaa sanadkii 2014 gacanta ku dhigtay magaalada Mowsil.
Inta uu ku guda jiro booqashadiisa Mowsil, Raysulwasaaraha Ciraaq ayaa la filayaa in uu iclaamiyo in gebi ahaanba magaalada laga xoreeyay Daacish.